Waa labo Guri oo dabaq ah oo isku dhegan kuna yaala Xaafada Xoosh ee Degmada Dharkenley, Laamiga Xoosh ayay ka yihiin Birimo iyo sugunto. Dhismaha Guryaha wuxuu ka kooban yahay 8 Qol, 3 Musqul, Kushiin iyo Parking weyn. Cabirka booskii waa 20x20M2. Qiimaha Booskiina waa $250,000.
Wixii faahfaahin ah, kala soo xiriir Kirosom Real Estate Solutions
#Tel: 0612 922 242 / 0612 922 241
Updated on February 19, 2018 at 3:44 am
26 June, Hargeisa, Somalia
Guriga iibka - Hargeisa, Somalia